NextMapping | Ọdịnihu nke Ọrụ
Olee otú NextMapping™ na-emepụta ọdịnihu ọrụ
NextMapping ™ na-elekwasị anya na ọdịnihu ọrụ yana yana usoro ndị ọzọ. Ndị ahịa anyị nwere nkwanye ùgwù na-eji ya maka izu maka izu na-abịa, afọ na-esote, ma ọ bụ afọ iri na-abịanụ.
Usoro NextMapping provides na-enye okirikiri iji nyere ndị ahịa aka inwe ọganihu dị ịtụnanya yana mgbanwe na -agagide ọrụ n'ebe achọrọ ịdị njikere ugbu a.
NextMapping ™ bu ihe puru iche na odi nma nke ihe ndi n’enwe mkpebi na emeputa ihe ya na ndi nwere ike ime ihe banyere ndi ahia / ndi n’ile ma ndi uwa.
Gịnị bụ NextMapping™ usoro?
Azụmaahịa ọ bụla nwere nsogbu na ohere dị iche.
Taimere ma hazie NextMapping™ maka gị, anyị ga - ebu ụzọ jikọọ na gị na ndị otu gị - ma mee nyocha nke anyị - iji gosipụta nghọta nke 'ọnọdụ gị ugbu a'.
Otu ihe ịma aka nye ndị isi na ndị otu bụ na ha na-ahụ azụmaahịa ha site na otu anya ma ọ bụ elele. Iji guzobe echiche zuru ezu karị, anyị na-eche echiche ma anyị na-eweghachi gị na ndị otu gị na nzukọ gị - site na oghere 'ọtụtụ echiche' nke ọdịnihu ọrụ.
Site na nghota nke nzukọ a, anyị na-ajụ ugbu a, "Kedụ ka o si ese ụbọchị ọdịnala ọhụụ? ọdịnihu dị njikere now.
N'itinyekwuru ya aka na oru maka oru odi n’iru, anyi n’ezizi nzaghachi gi. Site na ntuli aka dị ndụ, ajụjụ ọnụ na mkparịta ụka anyị na-ejikwa data agbakọtara site na gị na ndị otu gị ma mepụta nzaghachi agbakwunye.
Ke ama okokụt mme ukpep oro ye mme ndụn̄ọde, nnyịn imesifịnake se enye ọwọrọde ọnọ esop fo. Anyị na-ejikọ ntụpọ ahụ, na-akọwapụta ọhụụ na map gị nke ihe ọdịnihu ọrụ ga-adị ka azụmahịa gị.
Anyị ekepụtara ọdịnihu gị ọrụ maapụ - ugbu a ọ bụ oge iji mejuputa. Oge ikpeazu na NextMapping™ bụ ịkọwapụta usoro a ga - eme ga - eme ka nzukọ gị rụpụta ihe ọhụụ.